Speyin - ALinks
Iivenkile ezinkulu eBarcelona
January 16, 2022 UKaruna Chandna Barcelona, izinto zokwenza
Ezinye zezona venkile zibalaseleyo zaseBarcelona zezi: Las Arenas, El Corte Ingles, Diagonal Mar, Maremagnum, kunye neL'illa Diagonal. Apha uya kufumana lonke ulwazi oludingayo malunga neevenkile ezinkulu ze-Barcelona, ​​​​kubandakanywa neenkcazo zeevenkile. Udederhu lweevenkile ngaphakathi
Izikolo kunye nenkqubo yemfundo eSpain
January 7, 2022 UAntika Kumari isikolo, Speyin
Inkqubo yeSikolo kunye neMfundo eSpain iye yaphucuka kakhulu kule minyaka ingama-25 idlulileyo ngokunyuka kwenkcitho kunye nohlaziyo lwezemfundo. Uvavanyo lwamva nje lwe-PISA lwemigangatho yemfundo yabantwana abaneminyaka eyi-15 kumazwe amaninzi kunye noqoqosho lubonise ukuba ukusebenza kweSpain
Amazwe asimahla eVisa epasipoti yaseSpain
Oktobha 5, 2021 UAntika Kumari Speyin, hamba, ivisa
Abanikazi bepasipoti yaseSpain banokuhamba ngaphandle kwe-visa kumazwe angama-188, okwenza enye yeepaspoti ezihlanu eziphezulu kwihlabathi. Ukuhamba ngaphandle kweVisa kubemi baseSpain Ukuba unepasipoti yaseSpain, ungatyelela la mazwe ngaphandle
Uyifumana njani i-visa yaseSpain evela e-USA?
Agasti 29, 2021 IShubham Sharma Speyin, hamba, i-USA, ivisa
Ukuhamba ngaphandle kweVisa eSpain naseAndorra kuyafumaneka kubemi baseMelika ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintathu. Imithetho kaRhulumente eSpain inokufuna ukubuya okanye itikiti eliqhubekayo okanye ubungqina bemali, kuxhomekeke kwimeko ngelo xesha. AmaMelika athi
Ufumana njani umsebenzi eMadrid?
Agasti 26, 2021 UMaitri Jha imisebenzi, Speyin
Uyifumana njani imisebenzi eMadrid? Ungaqala ukujonga macala onke kuludwe lweewebhusayithi ezifanelekileyo. Google: xa uqala ukuzingela umsebenzi, ukukhangela kuGoogle okulula kunokuba sisiqalo esihle. Khangela uhlobo lomsebenzi onokuwuthanda
Izinto eziphezulu zokuthenga kwi-AliExpress
Ngamana 7, 2021 UMaitri Jha Chinese, Speyin, izinto ukuthenga, amakhonkco aluncedo
I-AliExpress ikhule yaba yenye yezona ndawo zaziwa kakhulu kwiivenkile zokuthenga kwi-Intanethi, inika uluhlu olubanzi lwezinto ngamaxabiso asezantsi kakhulu. Ikwanokhetho olukhulu kwimveliso kuyo nayiphi na iwebhusayithi yokuthenga kwi-Intanethi. Icandelo ngalinye linamakhulu
Indlela yokufumana indawo eSpain? Irenti kunye nezindlu eSpain
Disemba 14, 2020 UAntika Kumari izindlu, Speyin
ISpain ineentlobo ezininzi ezahlukeneyo zezindlu ezibonelelwayo njengengqeshiso yexesha elifutshane kunye nexesha elide. Ngokunyuka kweewebhusayithi ezinje nge-Airbnb, ukuBhukha, kunye neNdawo ezingafaniyo, eyokuqala iye yaduma kwiminyaka yakutshanje. Ukufumana indawo elungileyo yokuhlala
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eSpain? Iimbacu eSpain
Septemba 28, 2020 IShubham Sharma ababaleki, Speyin
Ukuba uhlala eSpain okanye ngaphandle kweSpain, unokufaka isicelo sokukhuselwa okanye ukukhuselwa kuwo omabini la matyala. Kukho izinto ezithile okanye amanyathelo ekufuneka uwalandele ngelixa ufaka isicelo sokukhuselwa. Kodwa kwinyathelo lokuqala, kuya kufuneka
Fumana i-visa yaseSpain ye-Schengen !! Landela la manyathelo !!
Aprili 29, 2020 UKaruna Chandna Speyin, ivisa
Ukuba ucwangcisa ukundwendwela eSpain kufuneka ufumane i-visa. Siza kubona ukuba ungasifaka kanjani isicelo seVisa eSpeyin. Nangona kunjalo, kukho iintlobo ezahlukeneyo ze-visa kwaye umntu unokukhetha ngokufanelekileyo. Njengawe unokufaka isicelo
Ungawufumana njani umsebenzi eSpain? Yazi Apha !!
Aprili 11, 2020 UKaruna Chandna imisebenzi, Speyin
1 2 I zithuba ezilandelayo»